Xukumadda Soomaaliya oo meel marisay Hindisaha Sharciga Maamulka Dakhliga – Kalfadhi
Shir ay yeeshaan Golaha Wasiirada Xukummadda Soomaaliya kii ugu dambeeyey sanadkan ayey ku meel mariyeen Hindise Sharciyeedka Maamulka Dakhliyada dalka. Hindisahan waxaa soo diyaarisay Wasaaradda Maaliyadda, waxa ayna Xukumaddu ka shqeeneysaa iney u gudbiso Golaha Wakiilada, oo lagu wado iney uga doodaan Kalfadhigooda 5-aad.
Hindisahan ayaa lagu dhex diyaariyey siyasadda soo ururinta dakhliga dalka iyo sidii loo maamuli lahaa, waxa uuna tilmaamayaa sida ay maamulka dakhliga Soomaaliya u kala leeyihiin hay’adaha dowliga ah Heer Federaal iyo Dowlad Goboleed intaba. Cidda iney dakhliga dalka, nuuc kasta uu yahayba, faraha la gasho ay tahay ayuu sidii caddeynayaa, Xukumad ahaan.
Golaha Wasiirada Kulankoodii ugu dambeeyey sanadkan waxay shalay uga doodeen Afarta Tubood ee ay Xukumadda Raysal Wasaare Xasan Cali Kheyre isugu soo ururisay wax-ka-qabashadeeda Soomaaliya, taas oo uu Raysal Wasaaruhu sheegay in wixii aan uga fulin sanadkan ay maanta ugu dambeyso ay ku qaban doonto sanadka xiga ee berri bilowga ah.